သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ပန်းဆေးထိုးအပ်
Dotec Needle Co., Ltd. ပေးဝေနေနှင့် Exporting, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြု ပန်းဆေးထိုးအပ်ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan။ ဒါဟာအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုညောနှင့်အတူအချိန်မှာသူတို့ကိုကယ်မနှုတ်ကျွန်တော်တို့၏အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုအကျယ်ဆုံးအကွာအဝေးထုတ်ကုန်များကိုပေးခြင်းအားဖြင့်ခြေလှမ်းရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်များ၏နေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
DB-N20 : ပန်းအပ်
K5H : စက်ကို ပန်းထိုးအပ်နဖားကို
L83 TOP : ပန်းအပ်
SHX1，SHX3 : ပန်းအပ်
Equivalent Systems: 854S, SY7505
ဒါဟာအော်တိုမက်တစ်ပန်းစက်အဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာအိမ်သူအိမ်သားများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဘို့, လွန်းပျံယာဉ်ပန်းစက်အပ်နဖားကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဇာပန်းထိုးထည် (Plauen) အဘို့ဖြစ်၏။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 854S, SY7505 ။
စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့တင်းကျပ်လမ်းညွှန်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းထားမြင့်မားတိကျမှန်ကန်မှု, ယူနီဖောင်းတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်များကိုကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ package ကိုဒီဇိုင်းပုံစံနှင့်အတူရှိ၏။
Size: 01/90 ~ 04/ 130
Equivalent Systems: 110S, SY7525
ဒါဟာအော်တိုမက်တစ်ပန်းစက်အဘို့ဖြစ်၏နှင့်ဇာပန်းထိုးထည် (SAURER), သင့်တော်အပ်ချုပ်စ​​က်စနစ်ဖြစ်သည်: SIRUBA စက်-M4348 ။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 110S, SY7525 ။
ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံး, Reasoning စျေးနှုန်း, အချိန် Delivery,
SH-C92 : ပန်းအပ်
SMX854 : ပန်းအပ်
size: 02/100, 04/130
Equivalent Systems: 0854; 0854V, SY7530
အဆိုပါဝိသေသ: နှစ်ဦးအပ်နဖားကိုအချက်များကိုအလတ်စားဘောလုံးကိုမှတ်နှင့်ပုံမှန်လှည့်လည်ပွိုင့်ကိုရွေးချယ်ပါတယ်။ အဆိုပါ groove လက်ဝဲဘက်ခြမ်းမှာရန်ဖြစ်သည်နှင့်မပဝါရှိပါတယ်။
၎င်းသည်အပို elastic ပစ္စည်းများအော်တိုမက်တစ်ပန်းစက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ချုပ်ရော်ဘာဖြစ်သည်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 0854; 0854V, SY7530 ။
110S TOP : အကောင်းဆုံးပန်းထိုးအပ်နဖားကို
Equivalent Systems: 110S TOP
အဆိုပါဝိသေသကို double ပဝါသည်နှင့် groove မှာကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလွန်းပျံယာဉ်ပန်းစက်အော်တိုမက်တစ်ပန်းစက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အပ်နဖားကိုအဘို့ဖြစ်၏။ ဒါကြောင့်တခြားနှင့်ညီမျှစနစ်များကိုမထားဘူး။
အရည်အသွေးမြင့်: စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့တင်းကျပ်လမ်းညွှန်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းထားမြင့်မားတိကျမှန်ကန်မှုများကိုကျွန်တော်တို့ကို enable လုပ်ပေးစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့တင်းကျပ်လမ်းညွှန်ချက်များ needles.Maintaining ယူနီဖောင်းမြင့်မားတိကျမှန်ကန်မှု, ယူနီဖောင်းတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်များကိုကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ package ကိုဒီဇိုင်းပုံစံနှင့်အတူရှိ၏။
1738 KK，1738 ES : ပန်းစက်အပ်နဖားကို
DBXK5，DBX1 KK，DBXK5 KK，DBX1 : စက်ပန်းထိုးအပ်နဖားကိုချုပ်
Point: R / Kn / BP ရေနံကုမ္ပဏီက / Suk / spî / SD နဲ့
Size: 07/55 ~ 19/120
Equivalent Systems: DB-K5, 1738ES, 1738KKSA
ထိုသို့ပန်းစက်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဘုံပိတ်ထည်, သိုးမွှေးထိုးပိတ်ထည်, ပိုးထည်နှင့်သားရေကုန်ပစ္စည်းများအပေါ်ပန်းထိုးဘို့အသင့်လျော်သည်။ ကူးသန်းရောင်းပန်းထိုးစက်အပါအဝင်ညီအစ်ကို, Tajima ။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: DB-K5, 1738ES, 1738KKSA ။
Equivalent Systems: 1738KK, DB-N20
ပန်းအဘို့, သော့ခတ်အပ်, ချည်မျှင်နှင့်အထည်ပိတ်ထည်များအတွက်အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးသုံးပြီး universal ။ မျက်စိသည်အရှည်နဲ့မျက်စိ width ကိုပုံမှန်လှည့်လည်အပ်နဖားကိုထက်ကြီးမား၏။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 1738KK, DB-N20 ။
Equivalent Systems: 1738ES
ဒါဟာသာမန​​်ပိတ်ထည်, သိုးမွှေးထိုးပိတ်ထည်, ပိုးထည်နှင့်သားရေကုန်ပစ္စည်းများအပေါ်ပန်းထိုးဘို့အသင့်လျော်သည်။ မျက်စိသည်အရှည်နဲ့မျက်စိ width ကိုပုံမှန်လှည့်လည်အပ်နဖားကိုထက်ကြီးမား၏။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 1738ES ။
ဒါဟာသာမန​​်ပိတ်ထည်သို့မဟုတ်သားရေများအတွက်သင့်လျော်သောကြောင့်, ingles အပ်နဖားကို flatbed စက်အဘို့ဖြစ်၏။ Size ကို9# ပါးလွှာသို့မဟုတ်အလတ်စားမိုးသည်းထန်စွာသိုးမွှေးထိုးကုန်ပစ္စည်းများတူပိတ်ထည်, ဝါဂွမ်းချည်မျှင်နှင့်အထည်နှင့်ဓာတု fiber ပေါ်မှာအပ်ပန်းထိုးသို့မဟုတ် zigzag များအတွက်သင့်လျော် # 16 ။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 1738; 287WH, 16X257, 16X231, 16X95, SY2254 ။